DesignCap: Manaova Poster maimaim-poana na Flyer an-tserasera | Martech Zone
DesignCap: Manaova Poster maimaim-poana na Flyer Online
Talata, Janoary 15, 2019 Sabotsy, Janoary 19, 2019 Douglas Karr
Raha voafatotra ianao ary mila manamboatra afisy na flyer tsotra sy tsara… jereo ao DesignCap. Tsy ny olon-drehetra dia mpampianatra Illustrator na manana fidirana amina mpamorona sary, ka tena mora ampiasaina ny sehatra toy izao.
miaraka DesignCap, azonao atao ny manomboka amin'ny fisafidianana modely tianao ary avy eo manampy, manaisotra, na manova habe an'ireo clipart niorenany na hitanao amin'ny safidin'izy ireo an-tserasera.
Misy ihany koa ny fifantina endri-tsoratra tsara indrindra amin'ny fanaingoana ny lohateny sy ny lahatsoratra mandritra ny afisy na flyer anao.
Endri-javatra amin'ny DesignCap Anisan'izany:
Modely an-jatony - Makà aingam-panahy avy amin'ireo maodely namboarina ho matihanina an-jatony ho an'ny tranga sy hetsika an-taonina.
Fully Customizable - Fitaovana fanovana dia ahafahanao manamboatra ny afisy sy ny flyer anao amin'ny tsindry totozy vitsivitsy monja.
Tehirizo, zarao, na pirinty - Tehirizo ny tetik'asa iray, zarao amin'ny media sosialy, na ataovy pirinty avy hatrany amin'ny browser
Malalaka ampiasaina - Maimaimpoana sy tsotra ampiasaina ny DesignCap. Tsy mila fampidinana na fisoratana anarana.
Amboary izao ny afisinao voalohany!
Tags: manangana flyerdesigncapflyer amin'ny Internet
Hevitra momba ny vokatra e-varotra: antony 7 antony maha-zava-dehibe ny fanamarihana an-tserasera amin'ny marikao
Nanazava ny fomba mahomby amin'ny mailaka manokana